Momba anay - Morsun LED
Miorina any Guangzhou, Sina, Guangzhou Morun Technology Co., Ltd dia iray amin'ireo mpamokatra jiro sy mpamatsy jiro nateraka Jeep, moto sy kamio sns.
Mifanaraka amin'ny fenitra ISO9001: 2000 Quality Management System Standard izahay. Ny ankamaroan'ny jiro tarihintsika dia manana mari-pankasitrahana CE, RoHS ary TUV. Manana ekipan'ny fikarohana & fampandrosoana ny vokatra fampiharana mahery vaika misy ny manam-pahaizana momba ny optika, herinaratra, hafanana ary ny firafitra. Nanambola dolara an-tapitrisany maro izahay tamin'ny fananganana ilay atrikasa famokarana static-proof sy tsy misy vovoka mandeha ho azy.
Miaraka amin'ny famolavolana optika sy hafanana marina, dia mandray ny toerana voalohany eo amin'ny sehatry ny Jeep taratra jiro, jiro zavona, jiro mitondra rambony, jiro asa ary jiro bar sns. Mpanamboatra matihanina, mpamatsy ary mpanondrana jiro LED any an-tsaha izahay. Ny kalitaon'ny vokatra, ny fanavaozana, ny teknolojia ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia nahatonga anay ho iray amin'ireo mpitarika tsy iadian-kevitra manerantany amin'ny sehatry ny jiro LED. Mitondra ny foto-kevitra "Quality First, Customer Paramount, Sincerity and Innovation" ao an-tsainay, ny orinasanay dia nahavita fandrosoana lehibe tao anatin'izay taona lasa izay.
Ny mpanjifa dia raisina an-tsena hividy ny vokatra mahazatra antsika, na handefa anay fangatahana oem. Mahagaga anao ny kalitao sy ny vidiny. Mifandraisa aminay izao azafady!